Donald Trump မော်ကွန်းတိုက် - အသိုင်းအဝိုင်းသတင်းများ: အွန်လိုင်းစီးပွားရေး, လက်ကား & B2B Marketplace သတင်း
tag ကို: Donald Trump
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 26, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 26, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေမှုနှင့်အစွန်းရောက်ဝါဒဖြန့်မှုတွင်ရိုးရာမီဒီယာများ၏အခန်းကဏ္ on နှင့် ပတ်သက်၍ ယူအက်စ်အိမ်သည်ကြားနာမှုပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ကြားနာမှုတွင်အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအသိုင်းအဝိုင်းမှကျွမ်းကျင်သူများနှင့်တီဗီပံ့ပိုးသူများပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ကြားနာခြင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကွန်ဂရက်အဖွဲ့ဝင်များသည်ထုတ်လွှင့်သည့်အခြေအနေများကိုနားလည်ရန်ဖြစ်သည်။
Trump ဆန့်ကျင် Triple Play ကယ်တင်တတ်၏
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 24, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရုံးချုပ် (SCOTUS) ယခင်သမ္မတ Donald Trump ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုပယ်ချခဲ့သည် သူ၏အခွန်ရှင်းတမ်းကိုနယူးယောက်ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များထံပေးပို့ခြင်း။ သမ္မတဟောင်းသည်သူ၏အခွန်ငွေကောက်ခံခြင်းကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည် ရှစ်နှစ်ကြာသောအမေရိကန်သမ္မတ၏သမိုင်းကြောင်း၌မကြုံစဖူးသောအခြေအနေများရှိခဲ့သည်။
Twitter က Trump ဘန်းအမြဲတမ်းအတည်ပြု
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
တွစ်တာသည်ယခင်သမ္မတ Donald Trump အပေါ်၎င်း၏တားမြစ်ချက်ကိုအတည်ပြုလိုက်ပြီ သူသည်သမ္မတအဖြစ်ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရလျှင်တောင်မှအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရပြီးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရရည်ရွယ်ချက်သည်အကြမ်းဖက်မှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုရန်တားမြစ်ထားသည်။ Twitter ၏ဘဏ္'sာရေးဒါရိုက်တာ Ned Segal၊ CNBC နှင့်အင်တာဗျူးတွင်၎င်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်။
စွပ်စွဲပြစ်တင်မှု ၂ - အထက်လွှတ်တော်သည်ရှေ့သို့ရွေ့သည်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏သမ္မတဟောင်း Donald Trump အားစွပ်စွဲပြစ်တင်မှုသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်။ အင်္ဂါနေ့တွင် အထက်လွှတ်တော်၏ဆက်လက်အတည်ပြုခဲ့သည် ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမိုကရက်ပါတီနဲ့ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီတချို့ရဲ့မဲတွေပါ ၀ င်ပြီးဇန်န ၀ ါရီလကပါလီမန်အဆောက်အအုံအပေါ်ချေမှုန်းရေးပုံရိပ်တွေပြသထားပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ 22, 2021 ဇန်နဝါရီလ 22, 2021 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း Donald Trump သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်နေထိုင်သောဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသားများအားသူမရာထူးမှထွက်ခွာပြီးနာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်းကိုကာကွယ်ပေးကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအပြောင်းအရွေ့ကတော့ Nicolas Maduro အုပ်ချုပ်ရေးကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ကတိက ၀ တ်ကိုအလေးအနက်ထားဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။
Donald Trump ကိုပိတ်ပင်ရန်ရုရှားက Twitter ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချ
ရုရှားလုံခြုံရေးကောင်စီဒုတိယဥက္ကHead္ဌနှင့်ရုရှားသမ္မတဟောင်း Dmitry Medvedev ကအမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုနှင့်ဒီဂျစ်တယ်အာဏာရှင်ဝါဒ၏ပြသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Donald Trump အကောင့်များစွာကိုလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ပိတ်ဆို့ထားသည်။
ပါလီမန်အဆောက်အတိုက်ခိုက်မှု - Business World သည် Trump ကိုရှောင်ရှားသည်
ဇန်နဝါရီလ 14, 2021 ဇန်နဝါရီလ 14, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ကုမ္ပဏီအများအပြားရှိသည် သူတို့ကိုယ်သူတို့ဝေးကွာ သေဆုံးမှုငါးခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ပါလီမန်အဆောက်အအုံတိုက်ခိုက်မှုအပြီးအမေရိကန်သမ္မတဟောင်း Donald Trump ။ နောက်ဆုံးပေါ် Deutsche ဘဏ်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာသုံးစွဲသူများဖြစ်သော Donald Trump ကိုဘဏ်မှစွန့်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဘဏ်၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။
ဇန်နဝါရီလ 13, 2021 ဇန်နဝါရီလ 13, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း Donald Trump ၏အုပ်ချုပ်မှုသည်ကျူးဘားနိုင်ငံအား၎င်း၏နိုင်ငံတော်၏အကြမ်းဖက်မှုပံ့ပိုးသူများစာရင်းတွင်ထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အိုဘားမားအစိုးရမှကျူးဘားကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ သမ္မတ Trump အိမ်ဖြူတော်မှထွက်ခွာမယ့်ကိုးရက်အကြာမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Trump သည်ဆန့်ကျင်မှုနှစ်ဆယ့်ငါးကြိမ်မြောက်ပြင်ဆင်မှုကို Pence သည်အသုံးမပြုပါ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒုတိယသမ္မတ Mike Pence ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, 25 ပြင်ဆင်ရေးမြွက်ဘူး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရန် သူ၏ရာထူးမှသမ္မတ Donald Trump ကိုရာထူးမှဖယ်ရှားပါ။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသမ္မတအားထောက်ခံသူများကပါလီမန်အဆောက်အအုံအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်တုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့်အောက်လွှတ်တော်ကထိုသို့တောင်းဆိုခဲ့သည်။
Biden သည်ခိုင်မာသော Trump စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရှောင်ရှားသည်
ဇန်နဝါရီလ 12, 2021 ဇန်နဝါရီလ 12, 2021 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
Joe Biden သည်လက်ရှိသမ္မတဟောင်း Donald Trump အားစွပ်စွဲပြစ်တင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်မျှမပြုလုပ်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ မစ္စတာဘိုင်ဒန်သည်စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ရန်စိတ်မ ၀ င်စားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Trump Trump သူ၏လမ်းထွက်အီရန်နှင့်အတူစစ်ပွဲတစ်ခုစတင်လိမ့်မည်နည်း
အီရန်သမ္မတဟာဆန်ရူဟာနီကအမေရိကန်တွင်ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့သောအဖြစ်အပျက်များကိုအီရန်လူ ဦး ရေအတွက်ဝါဒဖြန့်ရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယခုအပတ်တွင်အမေရိကန်လေးယောက်သည်ထိုဖြစ်စဉ်တွင်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သေဆုံးသွားသူများထဲတွင်ရဲအရာရှိတစ် ဦး နှင့်အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းဟောင်းအမျိုးသမီးတစ် ဦး ပါဝင်သည်။
Merkel "ဝမ်းနည်းဖွယ်, ပြင်းထန်သော"; ရိုဟာနီကအနောက်တိုင်းဒီမိုကရေစီကိုမှားယွင်းသည်
ဇန်နဝါရီလ 8, 2021 ဇန်နဝါရီလ 8, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
သမ္မတ Donald Trump အားထောက်ခံသူများက ၀ ါရှင်တန်တွင်ပါလီမန်အဆောက်အအုံကို ၀ င်ရောက်စဉ်သူမအနေဖြင့် ၀ မ်းနည်းကြောင်းနှင့်ဒေါသထွက်ကြောင်းဂျာမန်အဓိပတိ Angela Merkel ကကြာသပတေးနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ သမ္မတရာထူးမှနုတ်ထွက်သည့်သမ္မတအားဖရာကေ့စ်များအတွက်တာ ၀ န်ယူသင့်ကြောင်းထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ ဂျာမန်အဓိပတိကပြောတယ် မနေ့ကသတင်းထောက်တွေကို။
ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်က Biden Victory ကိုကန့်ကွက်ခဲ့သည်
အထက်လွှတ်တော်ကအများစုအားဖြင့်ရီပတ်ဘလီကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်များ၏ကန့်ကွက်မှုကိုပယ်ချခဲ့သည် ဂျိုးဘိုင်ဒန်၏အောင်ပွဲ အရီဇိုးနားပြည်နယ်အတွက်။ အရီဇိုးနားပြည်နယ်မှရလဒ်များကိုကန့်ကွက်ခြင်း - သမ္မတ Paul Gosar (R-AZ) နှင့်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Ted Cruz (R-TX) တို့က ဦး ဆောင်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညတွင် ၉၃-၆ မှပယ်ချခဲ့သည်။
နှစ်သစ်ကူးအနက်ရောင် - သုံးသောင်းအောက်တွင်ရှိသော Dow Falls
ဇန်နဝါရီလ 5, 2021 ဇန်နဝါရီလ 5, 2021 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အမြင့်ဆုံးအဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်အမေရိကန်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်သည်ပြိုလဲသွားပြီးနှစ်သစ်ကူးအနက်ရောင်နှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ Dow သည်အချက် ၄၀၀ နီးပါးကျဆင်းခဲ့သည်။ တစ်ချိန်ကအချက် ၃၀,၀၀၀ ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးအောက်သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ ရွှေနှင့်ငွေထိတ်လမ်းကြောင်းသစ်တက်နှင့်တက်။ Qutoutiao ၂၂% ကျော်၊ Bilibili ၁၀% ကျော်၊ Weilai 30,000% ကျော်တက်တယ်၊ Pinduoduo က ၆% ကျော်သွားတယ်။
House Narrowly Pelosi ကို Speaker အဖြစ်ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်
ဇန်နဝါရီလ 5, 2021 ဇန်နဝါရီလ 5, 2021 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အမတ်နန်စီပါလိုစီ (D-CA) သည်တနင်္ဂနွေနေ့ကအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကaker္ဌပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်။ ကျဉ်းမြောင်းစွာဆိုသော်ငြား။ အခြားသူတစ် ဦး ဦး ကိုထောက်ခံသည့်ဒီမိုကရက်ငါး ဦး ကစွန့်ခွာထွက်ခွာပြီးနောက်ပီဆိုစီသည်ရာထူးကိုကျဉ်းမြောင်းစွာရရှိခဲ့သည် သို့သော်ရီပတ်ဘလစ်ကန်အားလုံးသည် House Minority ခေါင်းဆောင် Kevin McCarthy (R-CA) အတွက်မဲပေးခဲ့ကြသည်။
Trump က SOS ကိုပို့သည်
သမ္မတရာထူးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်သမ္မတ Donald Trump ၏ကြိုးပမ်းမှုများသည်အငြင်းပွားနေသောရွေးကောက်ပွဲများအားပယ်ဖျက်ရန်မဲအလုံအလောက်ကို“ မည်သို့ရှာတွေ့နိုင်မည်နည်း” ကိုဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးရီပတ်ဘလီကန်ဘရက်ဖ် Raffensperger နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့်အချိန်ကြာမြင့်စွာပေါက်ကြားသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအပြီးစနေနေ့တွင်နောက်ထပ်အဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည် ဒီမိုကရက်ပါတီဂျိုးဘိုင်ဒန်၏အောင်ပွဲ
အီရန် - ယူရေနီယမ်သန့်စင်ခြင်းနှင့်စစ်ပွဲ
ဇန်နဝါရီလ 3, 2021 ဇန်နဝါရီလ 3, 2021 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
အမျိုးသားကော်မတီအစည်းအဝေးတွင်အီရန်နိုင်ငံသည်ယခုတနင်္ဂနွေတွင် Coronavirus ကပ်ရောဂါကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတ Hassan Rouhani က“ Coronavirus ကူးစက်ရောဂါဟာဘုံရောဂါမဟုတ်ပါ၊ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များနှင့်သမိုင်းဝင်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ 1, 2021 ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2020 Samuel Gush	2 မှတ်ချက်
မက္ကဆီကိုမူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းသည် coronavirus ကန့်သတ်ချက်များနှင့်နယ်စပ်တွင်ဖြိုခွင်းမှုများကိုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နေသောနည်းလမ်းအသစ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ New York Times သတင်းစာအရ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာ, အခြားတရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဲ့သို့မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးဂိုဏ်းများသည်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွင်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းဆက်လက်ကျဆင်းနေသည်, နှင့်အမေရိကန်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်လုံခြုံ - ဆိပ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးရန်နေ့လည်ခင်းကျဆင်းသွားနှင့်ရွှေအနာဂတ်အနည်းငယ်ပိတ်လိုက်တယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ရောင်းချမည့်ရွှေအနာဂတ်သည်တစ်အောင်စလျှင်ဒေါ်လာ ၂.၅၀ (သို့) ၀.၁% အထိဒေါ်လာ ၁.၈၈၂.၉၀ အထိကျဆင်းသွားသည်။ ရွှေအနာဂတ် ၀.၁% ကျဆင်းခဲ့သည် တနင်္လာနေ့မှာ။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 29, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 29, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump သည်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်သူ၏မူဝါဒကိုပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး၊ အကူအညီအတွက် $ 900 ဘီလီယံ စားသုံးသူများနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရန်။ သို့ရာတွင်ကပ်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကြောင့်ရေနံစိမ်းအနာဂတ်တွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး OPEC + မျှော်လင့်ချက်များပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့သည်။ ရေနံစိမ်းသည်အစောပိုင်းအကျိုးအမြတ်များကိုစွန့်လွှတ်ပြီးအနည်းငယ်နိမ့်ကျခဲ့သည်.
Twitter Tirade ရှိ FBI နှင့် DOJ တို့ကို Trump တိုက်ခိုက်သည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
ယူအက်စ်သမ္မတ Donald Trump သည်သူ၏ရွေးကောက်ပွဲလိမ်လည်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ငြင်းဆိုခြင်းအတွက်တရားရေးဌာန (DOJ) နှင့်ဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို (FBI) အားတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ တစ် bellicose ၌တည်၏ Twitter tirade စနေနေ့မှာသမ္မတဘိုဒီကသူ့ကိုဂျိုးဘိုင်ဒန်ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ဖို့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနဲ့စွပ်စွဲခဲ့တယ်။
Trump Coronavirus Stimulus အထုပ်လက္ခဏာများ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
များစွာသောနှောင့်နှေးပြီးနောက်အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump US coronavirus လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အစိုးရရန်ပုံငွေဥပဒေကြမ်းကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ Coronavirus ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူများနှင့်ဖယ်ဒရယ်အစိုးရအားရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရန်အရေးပေါ်အကူအညီအတွက်ဒေါ်လာ ၂.၃ ထရီလီယံလွှတ်ပေးလိုက်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 26, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 26, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင်အီရန်အရာရှိများကကြေငြာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် အပိုဆောင်းလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်များ၏ဖြန့်ကျက်။ ရုရှားလုပ်စနစ်များကိုအရေးပေါ်အစီအမံများအောက်တွင်တပ်ဆင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အမေရိကန်သို့မဟုတ်အစ္စရေးတို့၏တိုက်ခိုက်မှုများမှကာကွယ်ရန်အီရန်နျူကလီးယားစက်ရုံများအနီးတွင်ဗျူဟာကျစွာနေရာချလိမ့်မည်။
Trump Pardons Papadopoulos, Congressmen, အခြားသူများ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ရာထူးသက်တမ်းကုန်ဆုံးခါနီးတွင်သမ္မတရာထူးမှအနားယူတော့မည်ဖြစ်သောအမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump အခြားတဆယ်လူတွေကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်။ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွင်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးယခင်ကပါဝင်ခဲ့သည် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် George Papadopoulos နှင့်ဒတ်ခ်ျရှေ့နေ Alex van der Zwaan တို့သည်ရုရှားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်မှုများနှင့်ကွန်ဂရက်ကွန်ဂရက်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းနှစ် ဦး တို့ဖြစ်သည်။
Trump Veto Coronavirus အကူအညီပေးရေးအထုပ်မှခြိမ်းခြောက်နေသည်
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump သည်တနင်္လာနေ့တွင်ကွန်ဂရက်မှဒေါ်လာ ၉၀၀ ဘီလီယံတန်ကြေးရှိသည့် coronavirus အကူအညီအစီအစဉ်ကိုဝေဖန်မှုများကြောင့်လူတိုင်းကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ အင်္ဂါနေ့ညတွစ်တာတွင်တင်သည့်ဗွီဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျတွင်သမ္မတ Trump ကထိုအထုပ်ကို "အရှက်ရစေခြင်း" ဟုခေါ်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုပါကသူလက်မှတ်ထိုးမည်မဟုတ်ကြောင်းကတိပြုပြောကြားခဲ့သည်။
Joe Biden သည် Connecticut ပညာရေးကော်မရှင်နာ Dr. Miguel Cardona ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်၏နောက်ထပ်ပညာရေးအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်။ ၀ န်ကြီးဌာနအတွင်းရေးမှူးနေရာအတွက်နောက်ထပ်ရွေးချယ်မှုကိုလူသိရှင်ကြားကြေညာရာတွင်မစ္စတာဘိုင်ဒန်။ ဒေါက်တာ Cardona သည်ပညာရေး ဦး စီးဌာနတွင်ရှေ့ဆောင်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်မည့်အတွေ့အကြုံရှိပြီးအပ်နှံထားသောအများပြည်သူသုံးကျောင်းဆရာဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
ရုရှားက SolarWinds Hack ကိုဝါဒဖြန့်မှုအဖြစ်ဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်အစိုးရ ဒီလအကြီးအကျယ် hack ကြုံတွေ့။ ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရဟက်ကာများကွန်ယက်များကိုမီးရှို့ရမည်ဟုဆိုသည်။ ၀ ါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာကရုရှားကိုတိုက်ခိုက်မှုနှင့်ချက်ချင်းစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ကြောင်းအစီရင်ခံစာများရှိခဲ့သည် ဟက်ကာများသည် Microsoft ကိုအသုံးပြုခွင့်ရခဲ့ကြသည်။ အများစုကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရုရှား hack နောက်ကွယ်မှကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။
ပုံကြီးချဲ့ထားသော SolarWinds Hack အတွက်မီဒီယာကို Trump ကအပြစ်တင်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump သည်မကြာသေးမီက SolarWinds တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မလိုအပ်သောပြဇာတ်များဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်မီဒီယာများအားအပြစ်တင်ခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ and နှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအကြား ၀ င်ရောက်ကျူးကျော်မှုသည်ဖောက်သည် ၁၈၀၀၀ ကျော်အားမကြာသေးမီက software update တွင်ထည့်သွင်းထားသော malware များမှထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှတုန်လှုပ်ချောက်ချားစေခဲ့သည်။
ရုရှားအကျဉ်းသားများအတွက် Biden Whelan ကိုလဲလှယ်မည်လား။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 18, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 18, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
သူလျှိုမှုကြောင့်ရုရှား၌ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံခဲ့ရသောအမေရိကန်နိုင်ငံသား Paul Whelan ၏ရှေ့နေကယခုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည့်အမေရိကန်သမ္မတဂျော့ဘိုင်ဒန်သည် Mr. Whelan ကိုယ်စားထောက်ခံလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်မစ္စတာဝီလန်၌နိုင်ငံသားမျိုးစုံနှင့်အလွန်မေးခွန်းထုတ်စရာကောင်းသောပညာရှင်အကျိုးစီးပွားများရှိသည်။
AMLO, Bolsonaro Biden ကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အစပိုင်းတွင်သူ၏အောင်ပွဲသို့အမေသွားခဲ့သောထိပ်တန်းကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များအချို့သည်နောက်ဆုံးတွင်ရှိသည် ဒီမိုကရက်တစ်ကိုအမေရိကန်ရွေးချယ်တင်မြှောက်သူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ရုရှားကဗလာဒီမာပူတင်အပြီးနာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုသူ၏အောင်ခြင်းနှင့်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်ဘရာဇီးလ်နှင့်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသမ္မတများကတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 15, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 15, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ဒီဇင်ဘာလတွင် 15, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 15, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
ရွေးကောက်ပွဲကောလိပ် Vote Signal Barr အတွက်နောက်ဆုံးခေါ်ဆိုမှု
အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ် ဝီလျံ Barr တနင်္လာနေ့နှုတ်ထွက်ခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်ရာထူးမှနုတ်ထွက်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ၎င်းသည်သူ၏သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီတစ်လအလိုတွင်ဖြစ်ပြီးဂျိုးဘိုင်ဒန်သည်ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင်သမ္မတအဖြစ်ရာထူးရရှိသည်။ Barr ၏ထွက်ခွာသွားမှုကိုတွစ်တာတွင်သမ္မတ Donald Trump မှကြေငြာခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲကောလိပ်သည် Biden Win ကိုအတည်ပြုသည်
ရွေးကောက်ပွဲကောလိပ်အဖွဲ့ဝင် ၅၃၈ ဦး သည်တနင်္လာနေ့တွင်မဲပေးခဲ့ကြသည် ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်အနိုင်ရ လက်ရှိသမ္မတသမ္မတ Donald Trump ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်သူ၏သိသာရှုံးနိမ့်ရှိသည်ဖို့ရန်သူ၏ကြီးမားသောထိုးနှက်ဆက်ဆံ။ သမ္မတ Trump သည်မြင်သာထင်သာသက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုကိုစွပ်စွဲခဲ့သည်။
အီရန် - နေတန်ယာဟုက“ ပုံမှန်ပြန်သွားခြင်း” အမှားတစ်ခုကိုသတိပေးသည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
အီရန်နှင့်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ခြင်းသည်မှားသွားနိုင်သည်။ အစ္စရေး ၀ န်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကပူးတွဲသတင်းတစ်ရပ်ကိုပြောကြားခဲ့သည် အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး Robert O'Brien နှင့်တနင်္ဂနွေနေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ၀ န်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကအီရန်နှင့်နိုင်ငံတကာနျူကလီးယားအငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အတိတ်ကလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုခုခံတွန်းလှန်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Coronavirus - အမေရိကန်သည်ကာကွယ်ဆေးများစတင်ဖြန့်ဝေတော့မယ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ပထမဆုံးသောသဘောင်္တင်မှုကိုစတင်ခဲ့သည် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပြည်နယ်များအားလုံးတွင်အပူချိန်နိမ့်ကျနေစဉ် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်မှ ၁၆ ရက်မတိုင်မီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်လွှားဖြန့်ဖြူးရေးဌာန ၆၆၃ ခုသို့ဖြန့်ဝေမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ Pfizer နှင့် အချစ်ဇာတ်လမ်း ကာကွယ်ဆေးအတွက်ယူအက်စ်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲရေးမှအရေးပေါ်ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည်။
Barr အစောပိုင်းခေါ်ဆိုမှုတွင် ဦး ဆောင်ခဲ့သလား။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 8, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှေ့နေချုပ်ဝီလျံဘား (William Barr) ကစီစဉ်နေပါသည် လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းရာထူးမှဆင်းပေးရန် ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုသမ္မတအဖြစ်မခန့်အပ်မီ။ အမေရိကန်သတင်းစာများအရရှေ့နေချုပ်ဘားရ်သည်နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်မကြာမီထွက်ခွာရန်စဉ်းစားလာသည်ဟုဆိုသည်။
Coronavirus - Guterres သည် WHO ၏သတိပေးချက်များကိုလျစ်လျူရှုသောနိုင်ငံများဖြစ်သည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 4, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 4, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
၏အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ COVID-19 အပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုများကိုဆွေးနွေးရန်အတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏အခန်းကဏ္highlightကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပြီးသိပ္ပံသည် coronavirus ကူးစက်ရောဂါအပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏အခြေခံဖြစ်သင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Trump 2024? ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်ပြန်လည်ရောက်ရှိမှုကိုသမ္မတကအရိပ်အမြွက်ပြောကြားသည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
သူသည်ရှုံးနိမ့်ခြင်းကို ၀ န်ခံခြင်းမရှိသေးသော်လည်းသမ္မတ Donald Trump သည်အမေရိကန်၏သမ္မတရာထူးအတွက်ပြန်လည်အရွေးခံရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်အရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ 2024 သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ။ လေးနှစ်တာအံ့သြစရာပဲ။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်လေးနှစ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လေးနှစ်အတွင်းမင်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်” ဟုသမ္မတ Trump ကအိမ်ဖြူတော်ခရစ်စမတ်ပါတီတွင်လူစုလူဝေးကိုပြောကြားခဲ့သည်။
Barr - ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လိမ်လည်မှုကိုသက်သေမပြနိုင်ပါ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ်ဝီလျံဘားရ်ကသမ္မတ ဦး သိန်းစိန်၏တရားရေးဌာနသည်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကိုမှောက်လှန်ရန်လုံလောက်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုများကိုသက်သေမတွေ့ရဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ရှေ့နေချုပ်ကသူမှတ်ချက်ပေးသည် Associated Press နှင့်အင်တာဗျူးတွင်။
နိုဝင်ဘာလ 26, 2020 နိုဝင်ဘာလ 26, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
ပြင်သစ်အရာရှိများ၊ ကုမ္ပဏီအမှုဆောင်များနှင့်အကြံပေးများအရအမေရိကန်နည်းပညာကုမ္ပဏီများကဲ့သို့သော Facebook က နှင့် အမေဇုံ, မကြာသေးမီကပြင်သစ်အခွန်အာဏာပိုင်များထံမှသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် ၂၀၂၀ အတွက်ယူရိုသန်းနှင့်ချီသောဒစ်ဂျစ်တယ်အခွန်များပေးဆောင်ရန်သူတို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းကအမေရိကန်အစိုးရအားဒေါသထွက်ခဲ့သည်။
Trump 2024? Poll အသစ်ကသူသည် GOP အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်
နိုဝင်ဘာလ 25, 2020 နိုဝင်ဘာလ 25, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump သည်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်သူသည်နိုင်ငံရေးအရမေ့မထားနိုင်သေးပါ။ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောပထမဆုံးစစ်တမ်းအရဂျိုးဘိုင်ဒန်အနိုင်ရသည်ဟုယုံကြည်သူအချို့သည်လက်ရှိအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်သည် ထောက်ခံမှု၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုအတူကိန်းဂဏန်း ယခုမှစ။ လေးနှစ် 2024 ရီပတ်ဘလီကန်သမ္မတမူလတန်း၌တည်၏။
GSA သည် Biden Transition စတင်ခြင်းဖြင့်ရန်ပုံငွေများထုတ်ပေးသည်
နိုဝင်ဘာလ 24, 2020 နိုဝင်ဘာလ 24, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအထွေထွေ ၀ န်ဆောင်မှုများစီမံခန့်ခွဲမှု (GSA) သည် Trump အုပ်ချုပ်ရေးမှပိတ်ဆို့ထားသည့် Biden အုပ်ချုပ်ရေး၏တရားဝင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက်လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။ အများအပြားအမေရိကန်နှင့်နိုင်ငံတကာမီဒီယာအေဂျင်စီများ ကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည် သမ္မတ Donald Trump သည်ရွေးကောက်ပွဲကောလိပ်တွင်အရေးအပါဆုံးသောပြည်နယ်များရှိရွေးကောက်ပွဲများ၏ရလဒ်များကိုပယ်ဖျက်ရန်ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်သော်လည်းအထွေထွေ ၀ န်ဆောင်မှုများအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Emily Murphy သည်အသွင်ကူးပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
Trump ဆော်ဒီအာရေဗျမှာ G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်သည်
နိုဝင်ဘာလ 21, 2020 နိုဝင်ဘာလ 21, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်အကြီးတန်းအရာရှိတ ဦး ကပြောကြားသည် Donald Trump G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ယခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံးစီးပွားရေး ၂၀ မှခေါင်းဆောင်များထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဆော်ဒီအာရေဗျတွင်လုနီးပါးကျင်းပလိမ့်မည်။ The G20 နိုင်ငံများ ကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံးစီးပွားရေး ၇ ခုနှင့်ထွန်းသစ်စအင်အား ၁၃ ခုပါဝင်ပြီးနှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလ၌ပုံမှန်တွေ့ဆုံကြသည်။
ဂျော်ဂျီယာတွင်အတည်ပြု Biden Win အတည်ပြု
နိုဝင်ဘာလ 21, 2020 နိုဝင်ဘာလ 21, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ရှိရွေးကောက်ပွဲအရာရှိများကဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတလောင်းအားအတည်ပြုခဲ့သည် ပြည်နယ်၌ဂျိုးဘိုင်ဒန်၏အောင်ပွဲ သူတို့ကသမ္မတ Donald Trump ၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအားဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံအဖြစ်, မဲကို manual ရေတွက်ပြီးစီးပြီးနောက်။ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့်သမ္မတ ၁၉၉၂ တွင်ဘီလ်ကလင်တန်ကတည်းကဘီဒင်သည်အစဉ်အလာအရရီပတ်ဘလီကန်ပြည်နယ်ဂျော်ဂျီယာတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အနိုင်ရသောဒီမိုကရက်တစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Trump APEC ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်စီစဉ်ထားသည်
နိုဝင်ဘာလ 19, 2020 နိုဝင်ဘာလ 19, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေး ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က။ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံသည်ဒေသဆိုင်ရာဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက် (RCEP) ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အရာရှိများကဤအခြေအနေတွင်သမ္မတ Trump သည်အာရှ - ပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုညီလာခံ (APEC) အွန်လိုင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ရန်မျှော်လင့်ရသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်
Trump လုံခြုံရေး Krebs, ရွေးကောက်ပွဲလုံခြုံရေးအရာရှိ
နိုဝင်ဘာလ 19, 2020 နိုဝင်ဘာလ 19, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
လက်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ရှုမြင်သောအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ပေါ်ထွက်လာသောအမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump၊ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံလုံခြုံရေးအေဂျင်စီ၏ဒါရိုက်တာကိုထုတ်ပယ်ခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည် သူသည်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍“ အလွန်တိကျမှုမရှိ” ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ Trump ဒီစွပ်စွဲချက်များအတွက်မည်သည့်သက်သေအထောက်အထားများမပေးပါဘူး။
အီရန်နိုင်ငံရှိနို ၀ င်ဘာလဆန္ဒပြမှုများကိုနှိမ်နင်းသည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင်၊ ထောက်လှမ်းရေး ၀ န်ကြီး Mahmoud Alavi အပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုချမှတ် ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုနှင့်မသန်စွမ်းမှုဖောင်ဒေးရှင်း၏လက်အောက်ခံ ၂ ဦး နှင့်အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်အလီခမီနီယာနှင့်နီးစပ်သူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ။
ရွေးကောက်ပွဲလိမ်လည်မှုကိုပယ်ချခဲ့သူကို Trump မီးမီးလောင်
နိုဝင်ဘာလ 19, 2020 နိုဝင်ဘာလ 19, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ၏ဒါရိုက်တာပစ်ခတ်ခဲ့သည် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံလုံခြုံရေးအေဂျင်စီ (CISA)အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲသည်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်၏ထောက်ခံမှုဖြင့်ပြုလုပ်သည်ဟူသောစွပ်စွဲချက်များကိုပယ်ချခဲ့ခြင်းနှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်ထားသောခရစ်ခရစ်ကက်စ်
12... 11 ပို့စ်အဟောင်းများ